Serivisy fanadiovana sy fidiovana amin'ny lisitry ny lisitry ny mailaka: Maninona ianao no mila iray ary ahoana no hisafidianana | Martech Zone
Fanatanjahantena ra ny marketing amin'ny mailaka. Tao anatin'ny 20 taona lasa, ny hany zavatra novaina tamin'ny mailaka dia tsara ireo mpandefa mailaka dia manohy voasazy hatrany hatrany amin'ireo mpanome tolotra mailaka. Na dia afaka mandrindra tanteraka aza ny ISP sy ny ESP raha te hanao izy ireo dia tsy manao izany fotsiny. Ny valiny dia misy ny fifandraisan'ny roa tonta. Manakana ny mpamatsy tolotra mailaka (mpanome tolotra mailaka) ny mpanome tolotra Internet (ISP)… ary terena hanakana ny mpanjifany ny ESP.
Raha ratsy ny 10% -n'ny mailakao dia latsaky ny 44% no aterina!
Tsy tsotra toy ny opt-in indroa ao amin'ny orinasa izy io. Ireo tranonkala toa anay dia miara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fampielezan-kevitra iraisana amin'ny mpivarotra sy mpanjifa. Izahay dia tsy manome azy ireo fidirana amin'ny lisitry anay, fa matetika izahay dia manangona adiresy mailaka miaraka hanatanteraka fanentanana. Aretin'andoha be tokoa izany. Ireo mpamatsy tolotra mailaka dia tsy miraharaha ny fomba fiasa optin na ny lalan'ny fanamarinana; heveriny fotsiny fa spammer ianao.
Ireo ESP toy ny MailChimp dia nampihatra faharanitan-tsaina adiresy mailaka ao amin'ny rafitra antsoina hoe Omnivore. Miaraka amin'i Omnivore, Mailchimp dia nandefa fampitandremana 50,000 45,905 ary nanidy kaonty maloto XNUMX tao anatin'ny herintaona fotsiny. Mety hampiroborobo ny zava-misy izy ireo fa mampijaly ireo kaonty ireo… Miady aho fa ny ankamaroan'izy ireo dia orinasa mandefa ny lisitr'izy ireo fotsiny fa tsy mampiasa fomba fanao tsara indrindra.
Araka ny Jupiter Research, maherin'ny 20 isan-jaton'ny fisoratana anarana amin'ny mailaka misy lesoka typo, syntax, domain ary lesoka hafa. Manao zavatra tsotsotra toa ny fandefasana amin'ny lisitra taloha iray izay ahafahan'ny tokonam-baravarana adiresy mailaka misavoana miala ny tokonam-baravarany. Tsy ratsy izany. Tsy lazaina intsony ny botitra etsy izay manosika ny adiresy mailaka fandrika SPAM amin'ny alàlan'ny rafitra isan'andro hanandrana sy hisambotra anao. Ny mahatsikaiky, raha ny hevitro, dia mino aho fa mora kokoa ho an'ny SPAMMER ny miditra imailaka amin'ny mailakao noho ny orinasa antonony mandefa hafatra marina.
Ireo mpamatsy tolotra mailaka dia tsy marin-toetra loatra momba ny tahan'ny fandefasana azy ireo koa. Matetika izy ireo dia mihodina a 99% naoty fanaterana, saingy milaza ny fanontana kely fa taorian'ny nandefasan'ny mailaka vitsivitsy. Eny, izany… ny voalohany mandefa ireo adiresy mailaka tsy mety! Ny tahan'ny fanekena antonony ho an'ny a Score mpandefa ny 91 na mihoatra dia 88%. Ny fananana ny 1% amin'ny lisitranao ratsy dia mety hampihena ny fahafahanao maherin'ny 10%!
Soa ihany fa misy fanamarinana mailaka ary lisitra ireo mpamatsy fahadiovana eny an-tsena izay manangona faharanitan-tsaina ary hanampy anao hanadio ny lisitra alohan'ny hahatongavanao ao amin'ity korontana ity. Tadidio fa misy fahasamihafana lehibe eo fanamarinana mailaka mifanohitra amin'ny serivisy fanamarinana mailaka. Ny fanamarinana ny mailaka dia manamarina fa voaorina tsara ny adiresy mailaka, ary ny fanamarinana ny mailaka kosa dia mampiasa metodista haminany ny mety ho fandefasana azy.
Nahoana ianao no mila fanadiovana ny lisitry ny mailaka?
Ny fidiovana amin'ny mailaka dia dingana iray ilaina amin'ny fananana programa mailaka maivana amin'ny fandefasana mailaka ary hitazomana ny lazan'ny mpandefa tsara. Ireto misy scenario 4 izay ilana ny fanadiovana ny lisitry ny mailaka:
fifindra-monina - Raha mifindra amin'ny mpamatsy vaovao ianao dia dingana manadanja anao ny fanadiovana ny lisitry ny lisitry ny mailaka Paikady manafana IP.
Fametrahana Inbox ambany - Mety ho any amin'ny folder junk ny mailaka ataonao satria ny fandraketanao dia misy fandrika spam maro be ary adiresy mailaka voatafika ao aminy.
Saran'ny fisokafana ambany - Raha tsy refesinao ny tahan'ny fametrahana inbox anao ary ambany ny tahan'ny fisokafanao, dia mety mankany amin'ny folder junk ny mailakao noho ny vela-pandrika spam sy adiresy mailaka voafitaka.
re-andraikitra - Raha manana lisitra izay mbola tsy nandefasanao am-bolana ianao dia te-hanadio ny lisitra mba hisorohana ny fitomboan'ny bounces izay mety hisy fiatraikany amin'ny taham-bola azonao.
Ahoana ny fisafidianana serivisy fanadiovana lisitra mailaka
Nanjary nalaza be ity pejy ity, noho izany dia tianay ny manome torolàlana amin'ny fisafidianana mpamatsy iray ary ny antony nanasaratsaranay ny lisitra etsy ambany ho serivisy momba ny fahadiovana amin'ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny mailaka. Niorina tamin'ireto manaraka ireto ny tolo-kevitray:
Terms - manana serivisy sy politikam-pahafaham-po ve ny serivisy izay miantoka fa tsy hamerina na hamoaka ny adiresy mailakao amin'ny antoko fahatelo izy ireo?
Transparency - voasoratra an-kalamanjana amin'ny Internet ve ny serivisy miaraka amin'ny mombamomba ny fifandraisana amin'ny fananany ny sehatra, ny toerana misy ny orinasa, ary ny mombamomba ny fifandraisana? Toerana birao natokana ve ny orinasa (fa tsy PO Box na birao iraisana)?
Support - na manana fitaovana hifandraisana amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny mailaka, ny forme contact, na nomeraon-telefaona ny orinasa na tena nisy namaly ny fangatahana.
Integrations - Ny fanodinana adiresy mailaka betsaka dia zavatra iray, fa raha afaka mampifangaro ny rafitrao sy ny teboka fidirana izay angoninao ny adiresy mailaka ianao dia dingana iray mahomby kokoa izany.
API - manana API voarakitra tsara ve izy ireo hahafahanao mampifandray mivantana ireo sehatra misy anao manokana?
fanarahan-dalàna - na mipetraka ilay firenena na tsia miaraka amin'ny lalàna mifehy ny fiainana manokana toa ny GDPR na ny lalàna momba ny fanarahan-dalàna amin'ny spam.
Mpanohana ny fanadiovana ny lisitry ny lisitry ny mailaka:
Fanamarinana mailaka, famakafakana ary fanadiovana ny lisitra natao ho an'ireo olona maniry fitaovana haingana sy azo antoka nefa tsy misy tabataba sy fikorontanana rehetra. Dingana tsotra 3 fotsiny hanatsarana ny lisitrao.
Azo antoka ny tahan'ny fandefasana 98% + miaraka amin'ny lisitry ny mailaka voamarinao.
Safidy hisintomana ny lisitra vaovaonao sy ny tatitra manokana nataonao.
24 / 7 mitondra miaraka amin'ny olona tena any am-pita manampy.
Ampidiro ny lisitry ny mailakao
Mpanadio ny fanadiovana sy fanadiovana lisitry ny mailaka malaza
Ireto ny fanamarinana mailaka voalohany ary lisitra serivisy momba ny fahadiovana. Ireo rehetra ireo dia misy sehatra an-tserasera izay tsy takiana aminao ny hifandray amina ekipa mpivarotra ary samy manana ny fomba fampiasana data, mangarahara ary mamaly am-pahavitrihana ireo fangatahana fanohanana izy rehetra:
Ny fampiasana ireo serivisy fanadiovana lisitra ireo dia afaka manatsara ny isan-jaton'ny mailaka izay mahatratra ny boaty ahenao ny mety ho sakana nataon'ny Mpanome Tolotra Aterineto, ary ahenao ny risika ho voaroaka avy amin'ny mpamatsy tolotra mailaka anao… mendrika ny fampiasam-bola izy ireo raha manana lisitra taloha na miara-miasa amin'ny iray. Ataovy ao an-tsaina fa tsy hahatratra 100% tsotra izao ny lisitrao. Manova asa sy mpanome matetika ny olona, ​​mandao ny adiresy mailaka taloha.
Ny ankamaroan'ireo mpamatsy ireo dia manolotra ihany koa API hahafahanao mampiditra azy ao anatin'ny fizotranao.
Aerolead - mitadiava mailaka fandraharahana sy laharan-tariby momba ny fanantenana Manana extension chrome koa izy ireo.
BriteVerify - (ampahan'ny Validity ankehitriny) fitaovana ilainao hanesorana ireo mailaka tsy mandeha amin'ny datin'ny mpanjifanao, fanentanana amin'ny marketing amin'ny mailaka, na taratasim-baovao an-tserasera ary hitazomana azy ireo hahita soa. Azonao atao ny misintona sy mandatsaka rakitra mora foana, mizara ilay fisie amin'ny alàlan'ny rahona, ary mahazo tatitra an-tsipiriany momba ny lisitrao nefa tsy nifandray tamin'ny orinasa mihitsy. Manana an API raha te hampifandray azy ireo ny fanamarinana ny mailakao!
Clearout - Ity verifier mailaka be ity dia ahafahanao mampakatra ny tahiry mailaka ary manadio ny lisitry ny mailakao amin'ny tsindry tokana fotsiny.
DeBounce - Ny serivisy DeBounce dia ahafahanao mampakatra sy manamarina ny lisitry ny adiresy mailaka haingana sy amin'ny fomba azo antoka.
Checker mailaka - Mamantatra adiresy mailaka sandoka na tsy mety aminao.
Checker mailaka - (hafa noho ny etsy ambony) Email Checker dia iray amin'ireo mpisava lalana voalohany ao anatin'ny sehatry ny fanamarinana mailaka, manampy amin'ny fanatsarana ny fahafahan'ny fifandraisana amin'ny mailaka.
Kalitaon'ny data momba ny fanandramana - vahaolana fanamarinana mailaka izay mamantatra eo noho eo raha toa ka manan-kery sy azo alefa ny adiresy mailaka.
FreshAddress manampy ireo orinasa miankina amin'ny mailaka hitarika fidiram-bola amin'ny alàlan'ny fananganana, fanavaozana, fizarana ary fanadiovana ny lisitry ny mailaka.
ImpressionwiseNy sehatry ny angon-drakitra momba ny angon-drakitra dia miorina amin'ny fametrahana fitsipika napetraky ny politika sy ny algorithma fanaovana scanner amin'ny fotoana tena izy izay mampiasa fomba maro sosona hamantarana, hanamarinana ary hiarovana amin'ireo fandrahonana miorina amin'ny mailaka.
Computer - Manamarina haingana sy tsy misy ezaka ny adiresy mailaka sy ny domains mba hahazoana antoka ny maha-marina azy ireo alohan'ny handanianao fotoana, angovo ary vola tsy ilaina, mampitombo ny hafatry ny hafatrao amin'ny 90%.
Kickbox - Kickbox dia manome antoka fa mandefa mailaka amin'ny mpampiasa tena izy ianao ary manampy anao hanasaraka ny adiresy ambany kalitao amin'ny fifandraisana avo lenta. Arovy ny lazanao, ampitomboy ny tahan'ny misokatra, ary manangona vola amin'ny Kickbox.
MailerCheck - Fanamarinana mailaka, famakafakana ary fanadiovana lisitra natao ho an'ny olona maniry fitaovana haingana sy azo antoka nefa tsy misy tabataba sy fikorontanana rehetra. Dingana tsotra 3 fotsiny hanatsarana ny lisitrao.
MillionVerifier - Fanamarinana mailaka miaraka amin'ny taha ambony azo antoka sy takatry.
NeverBounce manafoana ireo adiresy mailaka tsy mety ary mampihena be ny tahan'ny fihenam-bidy amin'ny famoahana farany.
Proofy - Manamarina haingana ary manamarina ireo lisitry ny mailakao. Fanarahan-dalàna momba ny fiarovana ny fiarovana ny fiainana manokana any Etazonia sy Etazonia.
TheChecker - Professional an'ny 1,000 avy amin'ny firenena 80+ miankina amin'ny fanamarinana mailaka marobe sy ny serivisy fanadiovana ny lisitry ny mailaka.
TowerData - Ampitomboy ny tahan'ny fandefasana boaty amin'ny alàlan'ny fanadiovana ny lisitry ny mailaka adiresy mailaka tsy marina sy hosoka.
Xverify - Fantaro fa mandefa kaonty tsy handefa mailaka ianao. Xverify dia afaka manamarina adiresy mailaka amin'ny fotoana tena izy ary amin'ny alàlan'ny batch.
Webbula - Serivisy fanatsarana ny fahadiovana sy mailaka amin'ny mailaka.
Serivisy fanamarinana mailaka hafa an-tserasera
Ireto misy serivisy fanamarinana mailaka sy fahadiovana hafa izay tsy nanana ireo mari-pamantarana fitokisana rehetra amin'ireo orinasa etsy ambony.
Ampliz - Ampliz dia manamarina ny adiresy mailaka ataon'ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy ary manampy anao hitazona ny fahadiovan'ny mailaka manome ny taha ambony indrindra. Ity sehatra ity dia voasoratra anarana ihany koa amin'ny Bounceless fanompoana. Bounceless dia hanadio ny lisitry ny mailakao amin'ny alàlan'ny fitiliana ireo mailaka mbola tsy voamarina, fandrika spam ary domaine azo ampiasaina.
Antideo - Serivisy API Validation email handavana ny adiresy mailaka fanary / vonjimaika, mailaka spam, sns, hitandrina ny lisitrao ho madio.
Sakano ny adiresy mailaka fanary - Tadiavo ary sakano ny adiresy mailaka tsy azo ampiasaina, indray mandeha, fanariana, mailaka vonjimaika.
Validator mailaka marobe - rindranasan-tranonkala afaka manamarina raha tena izy na sandoka ny adiresy mailaka. Izay mandefa mailaka matetika dia afaka mandray soa amin'ny fampiasana ny rafitra.
CaptainVerify - zahao & diovy haingana ny lisitry ny mailakao. Tariho ary alatsaho ao amin'ny fitaovanay ny rakitrao ary hataonay ny ambiny. Tsotra, haingana ary azo antoka.
CleanTheList.com - fanadiovana sy fanamarinana ny mailaka.
Mifandraisa amin'ny - Mitadiava adiresy mailaka anao manokana ary koa nomeraon-telefaona
DataValidation - Hamarino haingana ny lisitry ny mailakao. Ampifandraiso ny kaonty MailChimp na ny fifandraisana tsy tapaka ho an'ny fanaraha-maso mitohy sy ny fikojakojana ny lisitra.
Mpivarotra mailaka - Manampy anao amin'ny fanivanana mailaka ambany kalitao ny mailaka mailaka avy amin'ny fifandraisana sarobidy. Izahay dia manome antoka fa mandefa mailaka amin'ny mpampiasa tena izy ianao ary miaro ny lazanao, mampiroborobo ny fampielezana mailakao ary manangona vola amin'ny Emailmarker.
eHygienics dia orinasa manamarina mailaka matihanina. Izy ireo dia manala ny bouncing, fandrahonana, mpanao fihetsiketsehana, litigator ary ny loza hafa rehetra azo tsapain-tanana avy amin'ny kaonty mpamandrika. eHygienics dia manolotra fotoana tena izy API sehatra izay ampiasain'ny mpamandrika isan'andro.
Valiny mailaka - Serivisy fanadiovana sy fanamarinana lisitra mailaka azo antoka izay hikosehana, hanadio, hanamarina ary hanamarina ireo tahiry adiresy mailaka misy anao.
EmailHippo - Serivisy fanamarinana an-tserasera momba ny mailaka ho an'ireo mpivarotra matihanina sy ny mpanjifany
EmailInspector - Diovy sy esory ny adiresy mailaka tsy mety ao amin'ny lisitry ny varotrao
Lisitry ny mailaka Hamarino - Ny lisitry ny mailaka voamarina dia miaro anao amin'ny sazy amin'ny alàlan'ny fanolorana ny vahaolana fanamarinana mailaka feno indrindra eny an-tsena, hahazoana antoka fa tsy misy boka, manan-kery ary manome ROI avo ny lisitry ny mailakao.
Alefaso i YoYo - Vahaolana fanadiovana lisitra fanamarinana mailaka matihanina.
Validator mailaka - Amin'ny alàlan'ny Byteplant Real-Time Online Validator dia afaka manamarina mora foana ianao raha misy adiresy mailaka ary manan-kery.
Klemail - Klemail dia mamela anao hijery raha misy ny mailaka alefanao. Arovy ny lazan'ny fonenanao ary ampitomboy ny tahan'ny tombam-bidyo.
ListWise - Nodinihinay ny valin'ny adiresy mailaka an-jatony izay nodiovinay mba hamolavolana motera fanadiovana lisitry ny mailaka vaovao izay matanjaka kokoa noho ny hatramin'izay. Andramo maimaimpoana ny ListWise II ary ento amin'ny avo vaovao ny fampisehoana mailakao
MailboxValidator - mifandray amin'ny mpizara mailaka ary manamarina raha misy na tsia ny boaty mailaka
Mailcheck - manamarina mailaka sy telefaona mampiasa tambajotra sosialy
Vondrona Mastersoft - mifantoka amin'ny angona aostralianina
Fanamarinana mailaka haingana - Serivisy an-tranonkala hanamarinana ny adiresy mailaka amin'ny ankapobeny na amin'ny tena izy amin'ny alàlan'ny REST API. Hitan'izy ireo ny mailaka tsy mandeha sy miasa ary manome anao tatitra feno amin'ny antsipiriany ianao.
SiftLogic - Fanamarinana sy fanoratana mailaka hanampiana ny fametrahana boaty ary hampitombo ny lazan'ny mpandefa.
Snovio - Automatique fanentanana mangatsiaka - mahita, manamarina ary manome mailaka amin'ny Snovio hahazoana taham-panovana tsara kokoa.
Truemail - Fanamarinana mailaka. Mora, haingana sy mora vidy. Diovy ny lisitry ny mailakao ary ampitomboy hatramin'ny 99% ny tahan'ny fandefasana anao. Ny dingana fanamafisana ny adiresy mailaka dia tsy mora velively.
Verifalia - Verifalia dia serivisy fanamarinana mailaka miorina amin'ny tranonkala ahafahanao mampakatra sy manamarina ny lisitry ny adiresy mailaka amin'ny fomba tsotra sy mora.
Disclosure: Tsy mandray andraikitra amin'ny fahombiazanao amin'ny fifidianana ny iray amin'ireo mpamatsy ireo izahay, fa te-hanome lisitra feno miaraka amin'ireo mpanamarina fanampiny. Mampiasa rohy mpiara-miasa izahay ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: Act-OnFanentanana mavitrikaactivetrailaeroleadsMailamailaka-CRMAiva-LabsamplizTsy MifantokaAWeberBombBombAza kivybouncelessBriteVerifyBrontoCampaign MonitorkapitenyMarketlisitra madiodiovy ny lisitraCleverreachClickFunnelsCognito-Formsfoana ContactmifandrayConvertKitnotsongain'ilayfanamarinana dataDataValidationDEAfanateranaAdiresy mailaka fanaryHitan'ny adiresy mailaka fanaryMiteteeHygienicsadiresy mailakafidiovana adiresy mailakavaliny mailakampanamarina mailakaafo fanadiovana mailakamailaka mailakahippo mailakafidiovana amin'ny mailakalisitry ny mailaka hanamarinafanamarinana mailakampamaritra mailakafanamarinana mailakaapi fanamarinana mailakamailaka yoyomailakaESPandranaFormdeskFormsiteFreshAddressFulcrumgdprGetsitecontrolGoogle-FormsHighrisehubspothubucoiContactIcontact-Proimpressionwisefametrahana boatyInsightlyInstapagetelefaoninaISPJotFormmailaka junksivana mailaka junkboaty kickKickofflabsklemailfanadiovana lisitramanadio lisitratanisao ny fahadiovanamailcheckermailchimpMailerlitemailjetMailupmarketoMoosendNocrmiotaratasyPowrporofoporofo.ioqasQualaroofanamarinana mailaka hainganaQuicktapsurveySaisine-RockRFC 1035RFC 1123RFC 2822RFC 5321RFC 5322 RFC 2821RFC 6531mpivarotra pardotlazan'ny mpandefaSendgridSendpulseSendxsharps springSmartemailingSmartsurveySmooveamin'ny spamfandrika spamadiresy mailaka fandrika spamSparkPostfitokonanaFanadihadiana-Na aiza na aizaadiresy mailaka vonjimaikathecheckertowerdatatruemailkarazana endrikaunbouncemanamarina ny lisitry ny mailakaverifaliamanamarina mailakavaliny mitsanganamitsanganavision6WooboxwufoomanamarinazapierzendeskZoho CRMZoho Forms
Apr 25, 2014 amin'ny 10: 49 AM
Topimaso tsara, Doug. Marihina anefa fa
ny fisorohana sy ny fandresena ny olan'ny fandefasana mailaka dia mila fandefasana
serivisy momba ny fahadiovana sy fanitsiana ary fanamarinana amin'ny mailaka mifanohitra amin'ny "ping" fotsiny
(izany hoe fanamarinana SMTP) omen'ny ankamaroan'ny mpivarotra ao amin'ny lisitrao. Ny fizahana SMTP dia tsy manome afa-tsy fampahalalana momba
na ny adiresy mailaka dia azo alefa amin'ny fotoana sy ny maha-marina ny
ireo valiny ireo dia mbola mamela betsaka ny irina satria maro ny ISP manao izay azony atao
hanakiviana ity fanao ity. Ambonin'izany, ny fitsapana dia tsy ny loza amin'ny mailaka
mpivarotra satria saika ny orinasa rehetra dia lavo ambanin'ny tokonam-baravarana avela
Ny olana lehibe indrindra atrehana
mpivarotra mailaka dia vokatry ny adiresy mailaka misy olana (oh: fandrika spam, honeypots,
ireo mpitaraina spam mavesatra, adiresy manimba sns ... ao amin'ny fisie ao aminy ary koa tsy nahy
lesoka momba ny fahadiovana satria ireo adiresy azo entina ireo dia ireo izay Spamhaus sy
fikambanana hafa fanivanana spam no mampiasa mba handrehitra ireo spammer ary haingana sy
Mijanona eo ivelan'ny radara an'ny
fikambanana manivana spam ary manatsara ny fahaizanao mitondra ary
fidiram-bola, ny olona iray dia mila miasa miaraka amin'ny hadio mailaka, fanitsiana ary fanamarinana
mpamatsy izay afaka:
1) Sakano ny olana
adiresy avy amin'ny fidirana ao amin'ny data sy hanadio ireo izay manana
efa tonga tany
2) Fanoratana ara-dalàna ary
lesoka momba ny fahadiovana hafa satria ny Spamhaus dia nanova ny ankamaroan'ny typoed matetika
adiresy ao anaty spamtraps
3) Hamarino ny
fanaterana ny adiresy mailaka tsirairay amin'ny alàlan'ny fanamarinana mifanohitra amin'ny mailaka manokana
hetsika (oh: misokatra, tsindrio, bouncing, fitarainan'ny spam, sns.), manan-tantara
arisivan'ny fanamarinana MX sy SMTP, ary fanamarinana SMTP amin'ny fotoana tena izy.
Vola ho an'ny serivisy etsy ambony
manomboka amin'ny denaria isaky ny adiresy mailaka ary milatsaka amin'ny volabe
mitombo. Ankoatr'izay, aza misy
mpamatsy tolotra izay tsy misy serivisy ao anaty andiany mandeha ho azy
(ie 24x7x365), sy ny maody batch feno serivisy, izay misy manual
Raha mitady hiantoka ianao
ny ezaky ny varotra mailakao hahatratra ny ROI tsara indrindra amin'ny farafahakeliny
Ny vola lany, ny manahirana ary ny risika, ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa fidiovana mailaka dia hanaporofo
ho fampiasam-bola kely tsara indrindra azonao atao.
Raha mila tsipiriany misimisy momba ny fomba 25% ny
ireo orinasa Fortune 100 ary koa mpivarotra an'arivony, lehibe na kely, dia
mitazona ny angon-kaonty mailaka vaovao sy vaovao, jereo http://www.freshaddress.com/services/email-validation/
Oct 8, 2014 amin'ny 2: 32 AM
Salama Doug sy billkaplan,
Ianao koa dia afaka mahita http://www.mailboxvalidator.com ho an'ny serivisy fanadiovana ny lisitry ny mailaka.
Mar 20, 2015 ao amin'ny 11: PM PM
Webbula.com dia orinasa hafa hijerena. Manome fahadiovana sy fanamarinana izy ireo
Mar 22, 2015 ao amin'ny 3: PM PM
Niampy, misaotra an'i Scotty!
Apr 23, 2015 ao amin'ny 4: PM PM
Misaotra an'ireo torohevitra, raha misy te hahalala bebe kokoa momba ny fividianana na fanadiovana ny tahiry mailaka momba ny marketing, jereo ity toro-lalana ity: http://bit.ly/1Ka27Hh
26 Jul 2015 amin'ny 8:19 PM
Efa nanandrana ve ianao http://www.bulkemailchecker.com ? Nanandrana serivisy vitsivitsy avy tamin'ny lisitrao aho ary taorian'ny tsy nahafa-po ahy na ny valiny na ny vidiny, dia nanohy ny fikarohana nataoko aho ary nahita Bulk Email Checker. Azoko am-pahatsorana ny milaza fa tapitra ny fikarohako serivisy fanamarinana mailaka ambany vidiny ambany. Nampiasa azy ireo aho nandritra ny 4 volana lasa ary tsy ho sambatra kokoa. Zahao izy ireo ary antenaina fa afaka manakana ny fikarohana ihany koa ianao!
Misaotra Doug, manaova faran'ny herinandro mahafinaritra!
27 Jul 2015 amin'ny 12:59 PM
Ao anaty lisitra io!
Sep 23, 2015 ao amin'ny 3: PM PM
Eo am-pikarohana orinasa hanamarina ny lisitra nataoko aho izao ary te hahalala ny antony tsy nahafa-po anao ny sasany amin'ireo mpamatsy hafa? Izaho dia vaovao amin'ity ary tena mandehandeha mamaky tranokala maro hamaritana izay mahasamihafa azy ireo. Ka raha azonao atao ny mizara ny antony tsy nahafa-po anao ny hafa ary maninona ianao no misafidy Bulk Email Checker mihoatra ireo tranonkala hafa rehetra. Hanampy ahy io ary angamba maro amin'ireo hafa mamaky an'ity. Hitako fa tsara kokoa ny vidiny amin'ny Bulk Email Checker fa tiako ho fantatra koa ny zavatra hafa mety hanatsara azy ireo. Misaotra mialoha amin'ny famaliana.
Sep 24, 2015 ao amin'ny 4: PM PM
Salama Simone, efa misy ny loza ateraky ny fampiasana lisitra taloha na fividianana lisitra. Ireo mpanome tolotra mailaka, amin'ny ankabeazany, dia manao tsinontsinona izay orinasa manafatra adiresy mailaka mbola tsy voadinika. Ary ireo Mpanome Tolotra Aterineto izay manaiky ny mailaka dia hamily tanteraka ny mailakao rehetra na hanakana ny mpamatsy anao raha maro amin'ireo adiresy mailaka ireo no miakatra na mitory ny mailaka ho SPAM. Vokatr'izany, ny fampiasana fitaovana fanamarinana lisitra dia manakiana rehefa mihodina amin'ny adiresy mailaka adiresy mailaka mifandraika. Raha mampiasa fitaovana tsy mety ianao dia atahorana ho voasakana amin'ny ISP ianao ary voaroaka amin'ny mpanome tolotra mailaka azy ireo.
Sep 1, 2015 ao amin'ny 11: PM PM
Misaotra anao tamin'ny lisitra !! Manana fanontaniana aho. Te-hanomboka ny serivisy fanadiovana mailaka ahy manokana aho. Azonao atao ve ny manolotra rindrambaiko tsara hovidiana. Tsy nahita vintana aho hatreto. Tiako ho mandeha araka izay azo atao izy io. Misaotra anao
Sep 2, 2015 amin'ny 10: 40 AM
Salama Josh, tsy fantatro ny any ivelany, fa angamba ny iray amin'ireo serivisy voatanisa eto dia manana API na manolotra vahaolana White Label. Izany dia hahafahanao manome marika ny vahaolana ho anao.
Sep 16, 2015 amin'ny 3: 26 AM
Fomba tsotra hanamarinana ny adiresy mailaka amin'ny base data, ny fizahana mailaka mandroso indrindra. Proofy.io.
Ao amin'ny andrana beta isika izao fa manana ny fomba fitiliana marina indrindra.
Mila valiny izahay. Afaka manome vola kely ianao hanandramana ny serivisy.
Sep 17, 2015 ao amin'ny 1: PM PM
Ampahafantaro anay rehefa lany amin'ny beta ianao ary ampianay amin'ny lisitry ny mpanome ianao!
13 Okt 2015 amin'ny 2:35 PM
Nandeha tany amin'ny tranokalanao fotsiny aho mba hizaha toetra ny serivisinao - tsy misy nomeraon-telefaona. Tsy azo inoana mihitsy hoe misy olona mampakatra ny lisitry ny mpanjifa fotsiny amin'ny tranokalanao nefa tsy manohina ny fotony miaraka amin'ny mpitantana kaonty na olona iray hanamarina fa tsy omeko loharanom-baovao tsy fantatra fotsiny ny mpamaky ahy.
13 Okt 2015 amin'ny 4:58 PM
Raha tsindrio ny Powered by Neverbounce dia ho hitanao ny nomeraon-telefaon'izy ireo eo amin'ny fisotroana misy azy.
5 Nov 2015 amin'ny 7:27 maraina
Hey Douglas. Somary gaga ihany aho fa tsy niresaka momba an'i Verifalia ao anaty lisitrao ianao. Toa tsy iray amin'ireo mpamatsy mailaka lehibe indrindra eropeana izy ireo fa manolotra fiasa tsy manam-paharoa izay tsy hitako na taiza na taiza, anisan'izany ny fanohanana ny adiresy mailaka izay tsy mampiasa abidia latina (manana mpanjifa marobe ao amin'ny lisitray izahay avy Singapaoro, Japon ary Arabia Saodita, ohatra), ary ny fahaizana manao fanamarinana lalim-paka mandalo pass maromaro, mba hanamarinana ireo adiresy mailaka misy olana miserana toy ny boaty mailaka noho ny quota na greylisting. Ity mpamatsy ity dia mampiharihary ihany koa ny API fanamarinana mailaka RESTful ho an'ireo mpamorona lozisialy sy tranomboky ho an'ny fiteny sy sehatra fampielezam-peo lehibe… Ary manana drafitra Maimaim-poana aza izy ireo izay tonga hatramin'ny 125 fanamarinana mailaka maimaimpoana isan'andro
5 Nov 2015 tamin'ny 7:07 PM
Misaotra - nampidirinay tao anaty lisitra i Verifalia!
25 Nov 2015 tamin'ny 4:56 PM
ary misaotra an'ity lahatsoratra ity 🙂
Mar 15, 2016 ao amin'ny 4: PM PM
Nampiasa ny sasany amin'ireo tolo-kevitra ato amin'ity bilaogy ity aho hisafidianana serivisy fanamarinana lisitra mailaka. Nifarana tamin'ny emaillistverify.com aho tamin'ny farany, ary raha faly niaraka tamin'izy ireo tamin'ny lisitra voalohany nataoko aho, ny lisitra manaraka rehetra ezahiko harahina amin'ny serivisin'izy ireo dia manana olana, amin'ny ankamaroany dia tsy afaka misintona ny lisitry ny madio aho mailaka avy eo. Inona no ilaina amin'ny fampiasana ny serivisin'izy ireo raha tsy hitako izay adiresy mailaka manan-kery? Ankoatr'izay, ny fanohanany dia tsy dia mandray loatra ary tsy variana loatra amin'ny fitazonana mpanjifa izy ireo.
Mar 15, 2016 ao amin'ny 5: PM PM
Nahazo vintana lehibe izahay tamin'ny Neverbounce… hany ka niara-niasa tamin'izy ireo izahay.
Apr 23, 2016 amin'ny 7: 41 AM
mila serivisy na rindrambaiko maimaimpoana aho…. misy foana ve?!
Apr 23, 2016 ao amin'ny 8: PM PM
Tsy mbola nahita aho.
Apr 25, 2016 amin'ny 7: 34 AM
Lahatsoratra tsara! Nanontany tena fotsiny aho raha afaka mampiditra serivisy toy izany amin'ny GetResponse?
Apr 25, 2016 ao amin'ny 7: PM PM
Andrea, mino aho. Heveriko fa ny fomba hanaovana izany dia ny fiasa ny endrikao miaraka amin'ny API an'ny orinasa mpanamarina. Raha vantany vao miverina toy ny voamarina ny mailaka dia azonao atao ny manery azy mankany amin'ny GetResponse.
Jul 9, 2016 amin'ny 1: 21 AM
Mampiasa aho izao https://www.emailverifierapi.com/ hanamarina ny adiresy mailaka amin'ny fampiharana mailaka mailaka amin'ny orinasa 500 harena. Tsy manana fitarainana aho satria tonga lafatra ny kalitaon'ny serivisy, na izany aza, mitady vahaolana hafa kely kokoa izahay izay manome kalitao mitovy. Azonao atao ve ny manolotra soso-kevitra maodely hafa mety hampiasaina? "Kilasy orinasa" ho teny lakile. Misaotra anao nanampy!
12 Jul 2016 amin'ny 5:58 PM
Manantena aho fa mandeha tsara ianao, hanavao anao fotsiny, manatanteraka ny fizotran'ny fanamarinana ny mailaka izahay.
izay tsy ilainao handaniam-bola. Ho faly kokoa aho hamaly anao momba ny fizotran'ny fomba fiasanay.
Izahay dia mahazo ny lisitra amin'ireo mpanjifa te-hanamarina mailaka, avy eo niantso ny resepera fandraisam-bahiny na ny General Manager an'ny orinasa izahay dia manangona ny mailak'izy ireo Valid,
amin'ny fanaovana an'io fomba io aorian'ny 15 andro dia zahanay amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny mailaka ataonay Eblast.
Raha misy manana fikorontanan-tsaina na fanontaniana momba ny fandaniana.
Aza misalasala mandefa mail anay fa hiverina any aminao haingana araka izay tratra izahay
Oct 25, 2016 amin'ny 8: 26 AM
Misaotra tamin'ny lahatsoratra! Nampiasa ny proofy.io aho ary nahafaly azy tsara izany. Ny fahendrena dia mora kokoa noho ny hafa ary hatramin'ny kalitao sy ny hafainganana.
Oct 25, 2016 amin'ny 8: 47 AM
misaotra betsaka anao amin'ny Proofy.io
Dec 2, 2016 amin'ny 4: 37 AM
Proofy.io dia orinasa mpisoloky. Tsy mandeha ny serivisy. Nandoa vola 10000 aho, nampakatra ny lisitr'ireo mailaka 4000 ary efa "Processing" tato anatin'ny 2 andro .. Ny fanampiana mivantana eo amin'ny tranokala sy ny fampahalalana rehetra momba ilay tranonkala hitako an-tserasera, amin'ny alàlan'ny Google dia avy amin'ny lehilahy foana. antsoina hoe Roman (izay mety tompon'ny tranokala ihany koa) sy ny sakaizany Anna. Tsy nahita fitsikerana azo antoka hafa aho ary tsy tokony hanome vola azy ireo satria nangina tanteraka izy ireo izao. Nisy zavatra nolazain'izy ireo momba ny “programmer miasa amin'ny mpizara amin'izao fotoana izao” fa nanomboka tamin'izay - tsy misy serasera ary tsy misy vola azo. AZA MAMPIASA proofy.io !!!
Dec 20, 2016 ao amin'ny 10: PM PM
Misaotra amin'ny torohevitra! torohevitra mahafinaritra.
Jan 9, 2017 ao amin'ny 5: 58 AM
Misaotra anao tamin'ny lahatsoratra!
Izahay dia mitady orinasa afaka manome antontan-taratasy nekena ofisialy momba fa tena marina sy voamarina ireo adiresy mailaka voamarina.
Mahafantatra orinasa toa izany ve ianao?
Jan 9, 2017 ao amin'ny 11: 30 AM
Tsy azoko antoka fa misy afaka manome fanamarinana ofisialy satria mijanona ny fampiasan'ny olona ny mailaka ary manova adiresy mailaka isan'andro. Ny tsara indrindra dia sehatra iray izay manandrana misambotra ny fanovana ny adiresy mailaka ary afaka esorina manohitra izany ny lisitrao.
11 Jan 2017 amin'ny 11:07 PM
“Ny mahatsikaiky, raha ny fahitako azy dia mino aho fa mora kokoa ho an'ny SPAMMER ny miditra mailaka ao anaty boaty mailakao noho ny orinasa antonony mandefa hafatra marina.”
Mety marina ny voalazanao tamin'io, fa izany dia satria amin'ny ankapobeny ny orinasa dia tsy mampiasa marketing amin'ny mailaka araka ny tokony ho izy, na matetika ampy hahatonga ny lisitr'izy ireo hampiasa bebe kokoa sy hahafantaran'izy ireo ny fomba fanao tsara indrindra. Tokony handefa mailaka matetika kokoa izy ireo (ny olon-drehetra).
Fa momba ny lisitry ny fitaovana… mahafinaritra!
11 Jan 2017 amin'ny 11:09 PM
Hanaraka an'ity lahatsoratra ity izahay amin'ny resadresaka podcast mahafinaritra amin'ny CEO an'ny Neverbounce, Oscar. Maharaha vaovao!
Jan 20, 2017 ao amin'ny 3: 20 AM
Heveriko fa tsy misy fomba hanamarinana ny mailakao raha vantany vao noforonina ny acc. Ka heveriko fa tokony hanao izany ianao rehefa mamorona acc amin'ny dingana voalohany.
Mar 28, 2017 amin'ny 11: 55 AM
Lahatsoratra mahatsiravina. Azoko fantarina ve raha nitantana ny Webinar niaraka tamin'ny CEO an'ny Neverbounce, Oscar ianao?
Apr 24, 2017 ao amin'ny 4: PM PM
Mitady fampahalalana momba ny fanamarinana adiresy mailaka amin'ny tena izy aho rehefa tonga any amin'ny orinasako ny mpanjifa vaovao. Misy ve io rindrambaiko / teknolojia azoko ampidirina ao amin'ny rindrambaiko ankehitriny? Sa mila miova amin'ny rindrambaiko rehetra misy ankehitriny isika? Raha ny tena izy dia manana olana amin'ny ekipanay isika amin'ny fanoratany adiresy mailaka ho an'ny mpanjifa diso na ny mpanjifa manao izany koa. Te-hampijanona azy amin'ny fividianana aho fa tsy diovina ny lisitra dia mitazona adiresy mailaka ratsy fotsiny isika fa tsy tonga any amin'ny mpanjifantsika.
29 Aogositra 2017 amin'ny 12:24 PM
raha ny fijerinao ny fanamarinana mailaka tena izy, dia mitenena amin'ny lehilahy ao amin'ny emailchecker.com, manana traikefa voalohany amin'ny fampiasana ny vahaolana amin'ny tena izy sy ny tsara sy ny marina aho!
Jun 27, 2017 ao amin'ny 10: 36 PM
Salama Douglas, fanangonana tsara any. Mahatsiaro aho fa tsy nahita mpilalao lehibe ianao - http://www.emailverifierapp.com Zahao azafady. Misaotra
29 Aogositra 2017 amin'ny 12:22 PM
Lahatsoratra tsara Doug tena be mpanaraka ary misy hevitra tsara, Izahay dia mitarika orinasa mpamokatra gen ary manana pejy manery maro manerana ny tranonkala ho an'ny mpanjifa ary manangona mailaka an'arivony vitsivitsy isan'andro! nampiasa orinasa vitsivitsy izahay fa niafara tamin'ny fiverenany tamin'ny orinasanay voalohany nizahanay toetra (orinasa iray antsoina hoe Email Checker) satria hitan'izy ireo fa ny rindrambaiko no tena marina sy azo antoka. Ampiasainay ny API misy azy ireo ao amin'ny pejinay maneritery ary fitaovana tsara ho anay izy io ary tena malaza amin'ny mpanjifanay, manolotra fanamarinana marobe koa izy ireo izay ampiasainay isaky ny mandeha ny endriny taloha fa mampiasa ny API-dry zareo isan'andro miaraka amin'ny valiny lehibe. Na izany na tsy izany dia te hizara ny zavatra niainako fotsiny aho satria fantatro fa misy fifaninanana be dia be any, omeo hiantsoantso ireo bandy ao amin'ny mailaka mailaka fa ny tranonkalany dia http://www.emailchecker.com ary lazao azy ireo fa i John Morgan no naniraka anao 🙂
15 Okt 2017 amin'ny 4:14 PM
Faly ianao fa nilaza ny maha samy hafa ny fanamarinana sy ny fanamarinana. Azontsika ampiana emailchecker.com ao anaty lisitra?
Oct 27, 2017 amin'ny 9: 39 AM
28 Okt 2018 amin'ny 12:53 PM
Ity misy fitaovana mahasoa iray hafa izay tiako hatolotra: https://debounce.io
Azonao ampidirina ao amin'ny lisinao ve izany?
Dec 10, 2018 amin'ny 7: 59 AM
Nanampy an'i DeBounce izahay, misaotra!
3 Mey 2019 tamin'ny 12:00 hariva
Te hanome soso-kevitra fampiharana iray hafa hanamarinana ny mailaka ianao - https://mailcheck.co
Mifindra bebe kokoa amin'ny mombamomba ny olona mifandraika amin'ny mailaka izy ireo, fa tsy amin'ny smtp mivantana. Io dia ahafahana mahazo fampahalalana bebe kokoa ary hamaritana fa tompon'andraikitra mailaka mavitrika amin'ny gravatar, gmail, sns.
5 Mey 2019 tamin'ny 6:56 hariva
Misaotra, nanampy aho!
Aug 6, 2019 amin'ny 10: 18 AM
Azoko atao ve ny manampy fitaovana iray lehibe hafa amin'ity lisitra ity?
TrueMail (https://truemail.io/) dia fitaovana fanamarinana mailaka tsara.
Tena marina sy mora ampiasaina izy io. Hanadio haingana ny lisitrao avy amin'ny adiresy mailaka tsy mety sy mampidi-doza izany.
Raha ny fanazavana, manana fanamarinana mailaka maimaimpoana 1,000 isam-bolana izy io.
6 Aogositra 2019 amin'ny 1:07 PM
Misaotra Alona! Nampidiriko tao amin'ny lisitra hafa izy ireo satria manafina ny firenena niaviany izy ireo ary mametraka ny data-n'izy ireo.
May 24, 2020 ao amin'ny 5: 50 PM
Azonao atao koa ny manamarina mailaka amin'ity serivisy fanamarinana maimaimpoana ity: https://www.emailverified.org
14 Nov 2020 amin'ny 5:06 maraina
Salama Doug, mahafinaritra ny fomba nitahirizanao ny lahatsoratra tato ho ato miaraka amin'ireo mpanome tolotra vaovao, deraiko izany ezaka izany. Te-hanome sosokevitra an'i Antideo ho ampiana ao anaty lisitra aho, io no iray amin'ireo serivisy mora vidy indrindra any. Ny ambaratonga maimaim-poana izay manome fanamarinana maherin'ny 5000 fanamarinana isam-bolana dia mihoatra noho ny ampy ho an'ny orinasa kely iray, noho izany dia mankasitraka tokoa raha afaka mijery ny serivisy (www.antideo.com) ianao ary mampiditra anay ao amin'ny lisitrao raha mahita ianao antonona.
18 Nov 2020 tamin'ny 4:41 PM
Misaotra anao, nampidiriko tao anaty lisitra io. Fanamarihana iray, toa tsy miraharaha ny tranokalan'ny orinasa ray aman-dreninao.